Lord Ernest Rutherford: taariikh nololeedkiisa, guulihiisii ​​iyo waxyaabihii la soo ogaaday | Saadaasha Shabakadda
Waxaa ka mid ah aqoonyahanno wax weyn ku soo kordhiyay cilmiga qarniyadii ugu dambeeyay waxaan haynaa Rutherford. Magiciisa oo buuxa waa Lord Ernest Rutherford wuxuuna dhashay Ogosto 30, 1871. Wuxuu ahaa aqoonyahan Ingiriis fiisikiste iyo farmashiye waxbadan ku soo kordhiyay dunida sayniska. Wuxuu ku dhashay magaalada Nelson, New Zealand. Mid ka mid ah waxyaabihiisii ​​ugu muhiimsanaa ee uu ku soo kordhiyay sayniska ayaa ah nooca atomiga ee Rutherford.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax walboo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato nolosha Rutherford iyo taariikh nololeedkiisa.
1 Taariikh nololeedka Rutherford
2 Baaritaannada ugu horreeya
3 Raadinta Rutherford
4 Abaalmarinta Nobel ee Kimistariga
Taariikh nololeedka Rutherford
Wuxuu ahaa wiilka ay dhaleen Martha Thompson iyo James Rutherford. Aabaha wuxuu ahaa nin beeraley ah una dhashay Iskotishka iyo makaanik, hooyadiisna waxay ahayd macalin Ingiriis. Wuxuu ahaa kii afraad ee kow iyo toban walaalo ah waalidkiisna had iyo jeer waxay doonayeen inay caruurtooda siiyaan waxbarashada ugu fiican. Dugsiga dhexdiisa macallinku wuxuu ku farxay waxyaabo badan isagoo isku rogay inuu noqdo arday karti badan. Tani waxay u ogolaatay Ernest Waxaan geli karaa jaamacadda Nelson. Waa kulliyad leh keyd weyn oo loogu talagalay dad badan oo karti leh. Wuxuu awood u yeeshay inuu horumariyo astaamo waaweyn oo rugby ah taasoo ka dhigtay inuu caan ku noqdo iskuulkiisa.
Sanadkiisii ​​ugu dambeeyay wuxuu galay kaalinta koowaad ee maadooyinka oo dhan wuxuuna awooday inuu galo kuliyada Canterbury. Markii dambe ee jaamacadda wuxuu ka qaybqaatay waxyaabo kala duwan naadiyada sayniska iyo milicsiga laakiin ma aysan dayicin dhaqankiisa rugby-ga. Sannado ka dib wuxuu sii xoojiyay waxbarashadiisa xisaabta iyadoo ay ugu wacan tahay deeq waxbarasho oo laga helay Jaamacadda New Zealand. Markii dambe wuxuu u istaagay xiisehiisa iyo awoodiisa xallinta dhibaatooyinka kala duwan ee kiimikada iyo xisaabta. Sidaa darteed, wuxuu ku noqon karaa arday weyn Cambridge.
Baaritaannada ugu horreeya
Baadhitaanadii ugu horreeyay ee Rutherford waxay bilaabeen inay muujiyaan in birta lagu soo dhejin karo iyadoo la adeegsanayo mawjadaha sare. Natiijooyinkiisa waxbarasho ee ugu fiicnaa ayaa u oggolaaday inuu sii wado daraasadaha kala duwan iyo baaritaannada muddo sannado ah. At Cambridge Cavendish Laboratories wuxuu awooday inuu fuliyo dhaqamadiisa isaga oo u maraya jihada daahfuriyaha elektarooniga Joseph John Thompson. Dhaqanka ayaa la bilaabay in la fuliyo laga bilaabo sanadka 1895.
Kahor intuusan u bixin inuu sameeyo tacabirka baaritaanka, wuxuu is guursaday Mary Newton. Dhawr sano kadib shaqadiisa awgeed ayaa loo magacaabay borofisar ka tirsan Jaamacadda McGill ee ku taal Montreal. Tani waxay ahayd Kanada. Sannado ka dib waa markii uu ku soo laabtay Boqortooyada Ingiriiska inuu ku biiray shaqaale macallin ah oo ka tirsan Jaamacadda Manchester. Waa halkan halka uu ka bilaabay barashada fasalo fiisigis tijaabo ah. Dhamaadka Thompson wuxuu ka dagay xilka agaasimaha sheybaarka Cavendish ee Jaamacadda Cambridge Rutherford ayaa badalay.
Mid ka mid ah weedhaha ugu caansan ee saynisyahankan waa kuwan soo socda:
"Haddii tijaabadaadu u baahan tahay tirakoob, tijaabo fiican ayaa lagama maarmaan noqon lahayd." Ernest Rutherford
Sannadkii 1896-kii ayaa durba la ogaaday raad-soo-saarista raadintani waxay saamayn weyn ku yeelatay saynisyahankan. Sababtaas awgeed, wuxuu bilaabay inuu baaro oo uu sameeyo cilmi baaris isagoo waqti dhaafaya iskuna dayaya inuu aqoonsado qaybaha ugu muhiimsan ee shucaaca. Wuxuu tilmaamay in qaybaha alfa ay yihiin nukliyeerka loo yaqaan 'helium nuclei' isla markaana uu layaabay qof walba oo cilmiga sayniska kujira sameynta aragtida dhismaha atomiga Taasi waa halka uu ka yimid naqshadda atomiga ee Rutherford. Abaal marin ahaan, waxaa loo doortay xubin ka tirsan Royal Society sanadkii 1903 ka dibna madaxweyne.
Qaab dhismeedka atomiga waxaa lagu sharraxay 1911 ka dibna waa la safeeyay Niels Bohr. Aan aragno maxay yihiin tilmaamaha ugu muhiimsan ee nooca atomiga ee Rutherford:
Waxaas oo dhan waxaa lagu muujiyey si tijaabo ah waxaana loo oggolaaday in la sameeyo amar cabbir ah oo loogu talagalay kordhinta dhabta ah ee nukliyeerka nukleus. Ernest wuxuu dejiyay aragtida ku saabsan shucaaca dabiiciga ah ee la xiriira isbeddelada lama filaanka ah ee canaasiirta. Hadduu ku noolaa wada shaqeyn ahaan shucaaca shucaaca mahadnaqa shaqadiisii ​​berrinka fiisigiska atomiga. Sidaas darteed, isaga waxaa looga tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah aabbayaasha edbintan.
Abaalmarinta Nobel ee Kimistariga
Wax ku biirinta sayniska waxay waxtar weyn u lahayd Dagaalkii Koowaad ee Adduunka. Waana suurtagal in la sameeyo daraasado kala duwan oo lagu ogaanayo gujisyada badda hoosteeda iyadoo la adeegsanayo mowjadaha codka. Tani waxay ahayd horudhacii ugu horreeyay ee daraasadaha, inkasta oo markii khilaafku dhammaaday, wareejintii ugu horreysay ee macmal ah ee walxaha kiimikada lagu fuliyay duqeynta atomikada nitrogen sida qaybaha alfa. Dhamaan shaqooyinka waaweyn ee Rutherford wali waxaa lagala tashanayaa maktabadaha iyo jaamacadaha aduunka oo dhan. Shaqooyinkiisa badankood waxay la xiriiraan shucaaca iyo shucaaca ka yimaada walxaha shucaaca.
Waad ku mahadsan tahay aqoonta uu ka helay baaristiisa ku saabsan kala daadashada cunsurrada, wuxuu awood u yeeshay inuu helo abaalmarinta Nobel ee kimistariga sanadkii 1908, kahor inta uusan daabicin qaabkiisa atomiga ah Cunsurka 104 ee miiska xilliyeed waxaa loogu magac daray Rutherfordium sharaftiisa. Si kastaba ha noqotee, waxaan ognahay inaysan jirin wax jira oo waara, in kasta oo saynisyahankan horumar weyn siiyay sayniska, wuxuu ku dhintay Oktoobar 19, 1937 magaalada Cambridge, England. Meydkiisa ayaa lagu dhexdilay Westminster Abbey halkaasna wey ku nastaan ​​kuwaas Sir Isaac Newton iyo Lord Kelvin.
Sidaad u aragto, waxaa jira saynisyahanno tiro badan oo khibrado iyo aqoon fara badan ku soo kordhiyay adduunka sayniska, marka la isu geeyo, waxay naga dhigayaan kuwo aad iyo aad u badan. Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto taariikh nololeedka iyo waxyaabaha uu qaban doono Rabbi Ernest Rutherford.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Rutherford